Supercomputer oo saadaaliyay kooxda guuleysan doonta final-ka Champions League Tottenham iyo Liverpool – Gool FM
(Yurub) 30 Maajo 2019. Kooxaha reer England ee Tottenham iyo Liverpool ayaa wada ciyaari doono kama dambeysta koobka horyaalada yurub ee Champions League, Supercomputer ayaana saadaaliyay kooxda koobka qaadi doonta.
Finalka Champions League ee u dhaxeeya kooxaha Reds iyo Spurs-ka wuxuu ka dhici doonaa magaalada Madrid ee caasimada dalka Spain gaar ahaan garoonka kooxda Atlético Madrid ee Wanda Metropolitano sabti ay taariikhdu tahay 1-da June.
Supercomputer-ka ay isticmaasho FiveThirtyEight ayaa saadaaliyay kulanka final-ka Champions League ee habeenka Sabtida, waxaana uu guusha siiyay kooxda Liverpool oo ugu cadcad inay koobka ku qaado caasimadda Spain.
Saadaasha uu Supercomputer-ka sameeyay ayaa sheegaysa in Reds ay haysato 72% fursad ay ku badin karto, halka Tottenham la siiyay kaliya fursad ah 32%.
Supercomputer ayaa horey u saadaaliyay bilawga xili ciyaareedkan dhamaaday ee 2018-2019 in kooxda Manchester City ay difaacan doonto koobka Premier League, taasoo aynu aragnay marka horyaalka lasoo xiray.
N'Golo Kanté oo halkiisa kasii wada rikoorkiisa ku guuleysiga koobabka tan iyo markii uu yimid England